Yoma Central, Author at Yoma Central
Author: Yoma Central
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ Yoma Central ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ နောက်ဆုံးတိုးတတ်မှုအခြေအနေသတင်းများ ကို ဝမ်း‌မြောက်စွာနဲ့ ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်။ ပထမဦးစွာ တိုးတက်လာသော တာဝါ ၁ ၏ ဆောက်လုပ်ရေးအခြေအနေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် YCP ၏ ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်မှုကို သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။ ယခုတွင် ၂၂ လွှာ အထိ လုပ်ဆောင်ပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ရန် အလွှာ ၄ လွှာ သာ ကျန်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တာဝါ ၁ နှင့် ၂ ၏ မျက်နှာစာများကိုလည်း ထပ်မံမွမ်းမံဆောင်ရွက်ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ MEP ကို လုပ်ငန်းခွင်၏ နေရာအနှံ့တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အတွင်းနံရံများမွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများလည်း တိုးတက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Dear Friends, Investors and Partners,We are very pleased to share this month’s construction news and update you on what has been achieved in recent weeks. The capacity within the Yoma Central Project in January is reflected in the construction’s steady progress made on Tower 1. It is now at level
St. Gabriel ဘုရားကျောင်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းစည်ကားလျက်ရှိသည့် ဗိုလ်ချုပ်စျေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် အလုပ်များနေသည့် Yoma Central လုပ်ငန်းခွင်တို့၏ အကြားတွင် ဗိုလ်ချုပ်စျေးဆောက်လုပ်ချိန်ထပ်ပင် စောသော အချိန်က ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် အိုဟောင်းနေသော ဘုရားကျောင်းငယ်လေး တစ်ခုနှင့် ကျောင်းအုပ်ဆရာ နေသည့် အိမ်လေးတစ်လုံး တည်ရှိနေပါသည်။ ဘုရားကျောင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၏ လက်ရှိတွင် နည်းပညာညှိနှိုင်းရေးမှုအဖြစ် တာ၀န်ယူထားသည့် Sandy မှ “ကျွန်မ တောက်လျောက် ပန်းပဲတန်းမှာ နေလာတာ ဒီ Yoma Central ဆောက်လုပ်တော့မှပဲ ဘုရားကျောင်းလေးကို သတိထားမိတော့တယ်။ ရှုပ်ရှပ်ခက်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စျေးနောက်မှာ အေးချမ်းတဲ့ အိုအေစစ်လေးတစ်ခုလို ဒီဘုရားကျောင်းလေးရှိနေတာကို မသိခဲ့မိဘူး။”ဘုရားကျောင်း ပြန်လည်မတည်ဆောက်ခင်က၁၈၈၉ ခုနှစ် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ထူထောင်ထားသည့် ပျဉ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားေသာ
Tucked away between Yangon’s bustling Bogyoke Market and the busy project site for Yoma Central sits St. Gabriel’s Church,aquaint little church and parsonage whose construction predates even the market itself. Sandy Linn, the current technical coordinator of the church renovation project, said, “I never even noticed the church
Downtown, Restoration, St. Gabriel’s Church
Yoma Central wins PropertyGuru Myanmar Property Awards for 2020
We are pleased to announce that the PropertyGuru Myanmar Property Awards jury has awarded Yoma Central four titles in this year's ceremony. Yoma Central won the award for Best Retail Development, Best Mixed-Use Development and Highly Commended Office Development in Myanmar. Access the full list of winners in The Property